11 sano oo ka soo wareegatay xilligii la soo bandhigay dastuurka dalka | Star FM
Home Wararka Kenya 11 sano oo ka soo wareegatay xilligii la soo bandhigay dastuurka dalka
11 sano oo ka soo wareegatay xilligii la soo bandhigay dastuurka dalka
Waxay maanta ku beegan tahay sanadguuradii 11-aad ee ka soo wareegatay xilligii shaaca laga qaaday dastuurka hadda wadanka laga isticmaalo.
27-kii bishii sideedaad ee sanadkii 2010-kii ayay ahayd markii xeerarkan lagu dhawaaqay.
Isbeddellada uu dastuurka cusub la yimid waxaa ka mid ah hannaanka dowlad wadaajinta ee 47-da ismaamul .
Qaar ka mid ah Kenyaanka oo muujiyay dareenkooda ku aaddan waxyaabaha ay ka faa’iideen dhaqangelinta dastuurkii 2010-kii iyo culeysyada jiro ayaa sheegay in aan la joogin xilligii la beddeli lahaa xeerarka wadanka lagu maamulo.
Sidoo kale waxaa jiro kenyaanka qaar oo dareemaya in musuqmaasuqa uu sare u sii kacay.
Tani ayaa imaanaysa iyadoo maalmo ka hor maxkamadda racfaanka ay laashay qorsho la doonayay in lagu beddelo dastuurka.
Next articleRaila oo doonaya in dib u habeyn lagu sameeyo adeegga booliska